Ihere kwesiri ime ndị ọmeiwu Igbo maka nchabi ego Bọjeti - Chekwas Okorie - naijagossips.com
By Chynyere | June 22, 2018
Media captionChekwas Okorie sị na nchabị ego a metutara ndị Igbo ọfụma
Onyeisi otu pati ndọrọndọrọ ochịchị United Progressive Party bụ Chekwas Okorie na-ekwusi ike na ndị omeiwu ala bụ ndị Igbo bụ ndị na-emegbu ndi Igbo niile.
O kwuru nke a maka ebubo nchabi bọjetị onyeisiala Naịjirịa bụ Muhammadu Buhari boro ndị omeiwu ala.
Okorie kwuru na ọ bụ ihe ihere na ndị omeiwu sị ọwụwa anyanwụ nọ na ọlụomeiwu ncha baa ndị Igbo n’anya, ma gakwa n’ihu kwuo na ya bu omume gosiri na ha ebụghị ndị ọwụwa anyanwụ n’ọbị. Gee ihe Chekwas Okorie kwuru n’elu.
Cheta na ụnyaahụ, ọmeiwu Ike Ekweremadu, bụ osote onyeisi ndị omeiwu ukwu Naịjirịa, na ndị omeiwu ọzọ sị ọwụwa anyanwụ Naịjirịa tinyere ọnụ na ebubo onyeisiala Muhammadu Buhari boro ndị omeiwu na ha chabiri ego ekwesiri iji rụrọ ọrụ na akwa Naịja nke abụọ, ọdọ ụgbọelu ndị n’Enugwu, ọzọ Benin/Ore nakwa ọtụtụ ọru ndị ọzọ ga abara ndị Naịjirịa ụru ma were ego tinye na ebe ọzọ.
Na nkọwa ya, Ekweremadu kwuru na uche ya na nke ndị omeiwu si ọwụwa anyanwụ Naịjirịa dị n’ọdọ ụgbọelu Enugwu so na ọrụ dị icheiche ndị omeiwu chabiri ego ya.
Image copyright @iamekweremadu
Nkenke aha onyonyo Ike Ekweremadu na-ekwe nkwa na ha ga-ahu isi okwu a
Ekweremadu kwuru na ọ bụ na ngalaba omeiwu a na-akpọ “commitee” na asụsụ Bekee ka nchabi a mere, ma kwuo na ndị commitee ometụtara gaha agwa ọha ihe mere na etu o siri mee.
Cheta na ụlọomeiwu nke etiti manyekwuru N500bn na N8.612tn bu egọ bọjeti afọ 2018 nke onyeisiala nyere ha ka ha lebanye anya nke mere ka bọjeti gbalie rue N9.120tn.
Buharị tụrụ arịrị maka mgbanwe ndị ụlọọimeiwu mere n’akwụkwọ bọjeti ahụ ma kwuo na ọ bụ iji ghara ịga n’ihu na ịkpụ ụkwụ dịka o si gbasa nhazighari akụnaụba Naijiria nke na akpụ n’ala mere ya jiri mechie anya ma tinye aka n’akwụkwọ ahụ.
Enyinnaya Abaribe kwenyere n’ihe Ekweremadu kwuru, ma kwuo na ya nchabi a tụru ha n’anya.
Maka ihe a mere, ndị omeiwu ọwụwa anyanwụ kwuru na ha ga-akpọ nzụkọ pụrụiche nke ga-enye ha aka mee ngwangwa jiri ụkwụ chọba ihe dị anyere na mmiri.
Abaribe n’onwe ya kwuru na ọ bụ n’ogige “commitee” ka nchabi a mere.
“Anyị kwenyere na anyi ga-agba mbọ chọpụta onye mere nchabi a,” Abaribe kwuru.
← World Cup 2018: Ahmed Musa dey make Nigeria stars do shaku-shaku Kedụ nwa afọ Igbo ahụ Buhari mere otu n’ime ndị isi CBN? →